Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Dagaal qasaaro kala duwan dhaliyay oo Goordhaw ka dhacay Duleedka magaalada Gaalkacyo
August 18 2017 15:37:32
Dagaal qasaaro kala duwan dhaliyay oo Goordhaw ka dhacay Duleedka magaalada Gaalkacyo
Waxaa goordhaw dagaal culus oo u dhaxeeyay Ciidamada Maamulka Galmudug iyo maleeshiyaad hubeesan uu ka dhacay duleedka magaaladaasi, waxaana dagaalka ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada maamulka Galmudug ay weerar ku qaadeen goob ay isbaaro dhigteen maleeshiyaad hubeesan oo kutaala duleedka magaalada Gaalkacyo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal dhax maray Ciidamada Galmudug iyo maleeshiyaadka isbaarada dhigtay.
Inta la xaqiijiyay labo qof oo kamid ahaa dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay, waxaa sidoo kale dagaalka ku dhaawacmay ku dhawaad 10-qof kale oo kamid ahaa ciidamada iyo Maleeshiyaadka dagaalka la galay.
Halka lagu dagaalamay waxaa hada gacanta ku haya Ciidamada maamulka Galmudug, waxaana wali laoo sheegayaa in goobaha qaar laga maqlayo rasaas goos goos ah oo u dhaxeysa labada dhinac ee dagaalamay.
Maamulka Galmudug ayaa horey ugu hanjabay in ay la dagaalamayaan maleeshiyaadka isbaarada dhigta wadada u dhaxeysa Magaalada Gaalkacyo iyo Galinsoor ee gobolka Mudug, waxaana isbaarooyinkaasi dhibaato ku qabay dadka wadadaasi ku safra.